BASHIIR MAKHTAL OO MAXKAMAD LA SOO TAAGAY!!!!!!!!!!!!!!! | Toggaherer's Weblog
DALKA HOLLAND OO SHARCI CUSUB KUSOO ROGAY SOMALIDA ISKA DHIIBTA DALKEEDA
Bashir Makhtal waa wiil uu awoow u yahay mid ka mid ah aasaasayaashii jabahadda ONLF, sidaa darteed waa ay iska caddahay sababta Ethiopian-ku ay u doonayaan, markii ay ka qabteen soohdinta Kenya.
Qoyskiisa iyo saaxibadii waxa ay sheegayaan inuu ahaa nin ganacsade ah, oo ka ganacsanayay dharka, waxaana ay sheegeen in uu ku jiray safar ganacsi markii ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya, oo uu isaga baxay halkaasi isagoo ka fogaanayay in dagaal uu ku qabsado.
Hadda waxa lagu soo oogay dacwad ah inuu ku lug leeyahay oo uu qeyb ka yahay hoggaanka jabahadda ONLF, oo qoraneysay, isla markaana tababaraysay dagaalyahano ONLF ah, iyo inuu ku soo hogaaminayay weerarro ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Soomaalida ee Ethiopia.
Dhageysiga dacwaddiisa bishii hore, ayaa waxa ay dacwad oogayaashu ku guuldareysteen inay keenaan wax marqaatiyaal ah, waxaana digniin xaakimku ku bixiyay inay keenaan 20 April, haddii kale ay socon doonto dacwaddu iyaga la’aantood. Laakiin dhageysi aan horey loo qorsheyn ayaa la qabtay toddobaadkii hore, taasi oo uu codsaday dacwad-oogaha oo markii danbe ka keenay marqaati gobolka Soomaalida ee Addis Ababa.
Qareenka difaacaya Bashiir Makhtal, GebreAmlak GebreGiorgis ayaa BBC u sheegay in lix marqaati loo keenay inay ku marqaati furaan Bashiir, kuwaasi oo shan ka mid ah bixiyeen caddeymo, laba horey uga tirsanaa guddiga dhexe ee fulinta ee ONLF iyo saddex kale oo xubno horey uga ahaa ONLF.
Waxa uu sheegay inay marqaati ka bixiyeen aqoonta ay u leeyihiin Bashiir intii u dhexeysay 1998 ilaa iyo markii la xiray.
Dhageysiga kale ee dacwadda ayaa dhaceysa 20-ka April, markaasi oo xaakimku uu xukumi doono in kadib marka la dhageysto dacwadda marqaatiyaashani ay tahay kiis xooggan oo laga jawaabi karo.
Mr GebreAmlak waxa uu sheegay inuu rajeynayo, in xaakimku u gudbi doono xukunka, kadibna uu ku doodi doono difaaca Bashiir.
Dhageysiga dacwaddii hore ayaa xaakumki waxa uu amray maamulka xabsiga Kaliti, oo ah meesha lagu hayo Bashiir Makhtal inay u ogolaadaan safaaradda Canada inay si joogto ah u arkaan Bashiir.
Safaaradda Canada ayaa sheegtay maanta in arrintani aan wali la xallin, laakiin ay rajeynayaan inay u ogolaadaan inay arkaan Bashiir Makhtal horaanta toddobaadkan.